Nidaamka biqilka ka hor ErFra ayaa ku soo laabtay wax soo saarka - Majaladda Nidaamka Baradhada
в News, Aruurinta keydinta, Isbeddellada / Isbeddellada
ErFra VoorKiemSystem (VKS) ee Erik Juurlink iyo Frank Houtink ayaa loo soo bandhigay suuqa hal-abuurnimo sannadkii hore. Kani waa raakidh alwaax ah oo laalaabi karo oo leh suunka ku habboon sanduuqa kaydinta baradhada. Nidaamka biqilka ka hor, qiyaastii 1000 kg ee baradhada abuurka ayaa la gelin karaa sanduuq.
Nidaamkani waxa uu hubinayaa in baradhadu ay si siman u biqlaadaan oo ay ka hortagaan uumi ka samaysan gudaha sanduuqa. ErFra VKS waxay leedahay nooc ka mid ah "saameynta qiiqa", kaas oo hubiya in baradhada abuurka ee sanduuqyada si siman loo kululeeyo.
Nidaamka biqilka ka horreeya ErFra VKS wuxuu ku habboon yahay sanduuqyadaada alwaax ah (160 x 120 x 109 cm) waa la isku dhejin karaa. Marka la buuxinayo sanduuqa, nidaamka pregerminating-ka waxaa lagu dabooli karaa dabool. Nidaamka biqilka ka hor ErFra VKS waa la laalaabi karaa kaydinta fudud.
Tags: baradhada abuurkaydinta baradhada
PC "Miloslavsky" wuxuu bilaabay ka shaqeynta baradhada dalag cusub
MUDDADA PHYTOPHTOROSIS WAA PUTATO CROP IN INDIA